संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यो रोग कोभिड–१९ लाई विश्वभरि पैmलिएको महामारी (प्यान्डेमिक) भनी गत मार्च ११ तारिखका दिन नै घोषणा गरेको हो । सन् २०२० जुलाई २ को बिहानसम्म कोभिड–१९ भाइरसका कारण विश्वका २ सय १५ देशका १ करोड ८ लाख १० हजारभन्दा बढी मानिस बिरामी रहेका छन् भने तीमध्ये ५ लाख १९ हजार ५० जनाले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका छन् । त्यस्तै बिरामीमध्ये ६० लाख ३२ हजार चानचुन बिरामी निको भएर घर फर्केका छन् भने ५७ हजार ९ सय जना अभैm पनि सिकिस्ति बिरामी रहेका छन् । स्मरणीय छ, गत मे २५, २०२० मा कोभिड–१९ का कारण बिरामी हुने मानिसहरूको संख्या ५५ लाख हाराहारी र मृत्यु हनेको संख्या ३ लाख ४७ हजार नजिक थियो । त्यस्तै त्यो बेला २३ लाख २ हजारभन्दा बढी मानिस निको भएर घर फर्केका थिए भने ५३ हजार २ सय मानिस सिकिस्त बिरामी थिए ।
जे होस्, नेपालमा पनि कोभिड–१९ को असर व्यापक हुने लक्षण वा भनौं संकेतहरू देखा परेपछि सरकारले वि.सं. २०७६ चैत ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म एक हप्ताका लागि ‘लक डाउन’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, चैतको १५–१६ ताका नेपालको सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ को ‘स्टेज–२’ (विदेशबाट आएकाले नेपालमै रहेका आफन्तलाई सारेपछि) देखा परेपछि नेपाल सरकारले फेरि अर्को १ हप्ताका लागि अर्थात् चैत २४ गतेसम्मका लागि लकडाउन थप्यो । त्यसलाई पनि अधिकांश नेपाली जनताले सहर्ष स्विकारे । तर, यसबीचमा कोभिड–१९ को संक्रमितहरूको संख्या स्थिर रहनुको सट्टा झनै बढ्दै गएपछि अझ भएन भनेर नेपाल सरकारले एकैचोटि (दुई वर्षका लागि) वि.सं. २०७७ वैशाख १५ गतेसम्म लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा ग¥यो । त्यसबीचमा उल्टै कोभिड–१९ कै कारण मानिसहरू मर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले फेरि जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लागू गरेको थियो । हुन त अहिले पनि सपिङ मल, सिनेमा हल, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, पार्टी प्यालेस, हवाई यातायात र लामो दूरीको बसलगायतका सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छैन ।
नेपाल सरकारले सुरुमा ‘लकडाउन’ लागू गर्दाताका नेपालमा कोभिड १९ का बिरामी १–२ जना मात्रै देखिएको थियो भने हालसम्ममा कोभिड–१९ का कारण बिरामी हने मानिसहरूको संख्याले १४ हजार नाघेको छ । त्यस्तै २९ जनाले आफ्नो अमूल्य जीवनसमेत कोभिड–१९ कै कारण अकालमा गुमाएका छन् । त्यसैले यस विषयमा सरकारको कमजोरी कहाँ रह्यो ? किन यस्तो अवस्था आयो ? गम्भीर रूपमा छलफल र बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । समाज न हो, त्यसमाथि बाँच्नुप¥यो । बाँच्नका लागि खानुप¥यो । खानका लागि आम्दानी गर्नुप¥यो । आम्दानी गर्नका लागि काम गर्नप¥यो । काम गर्नका लागि बाहिरफेर निक्लनैप¥यो । त्यसैले धेरै मानिसले सरुमा ‘लकडाउन’ लाई निको माने तापनि पछि गएर बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएपछि निको मानेनन् ।
अभैm पनि विश्वका लगभग एकचौथाइ जनसंख्या कोभिड–१९ नामक संक्रामक भाइरसको महामारीको आतंक र त्रासबीच ‘लकडाउन’ र ‘संकटकाल’को सामना गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्, अर्बाैं मानिस कोभिड १९ को प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । राज्यव्यवस्था राम्रो भएको देशका जनतालाई त ‘लकडाउन’ र ‘संकटकाल’का कारण खान नपाएर आज मर्ने कि भोलि मर्ने ? भन्ने पीर छैन, अर्थात् उनीहरूलाई ‘लकडाउन’ र ‘संकटकाल’ अवधिभरि के खाने ? कसरी बाँच्ने ? भन्ने र अहिले के खाऔं, भरे के खाऔं ? भोलि के ... ? भन्ने खासै चिन्ता छैन । किनभने ती देशका सरकारले नै आफ्ना जनताका लगि सबै कुराको व्यवस्था गरिदिएको छ । किनकि ती देशका सरकार तथा राज्य प्रमुखहरू र नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले ‘मानव पुँजी’ भनेको के हो ? भन्ने राम्रोसँग बुझेर आत्मसात् गरेका छन् ।